'पैताला'को बागलुङमा समीक्षा ~ जोगी जिन्दगी
'पैताला'को बागलुङमा समीक्षा
11:25 PM पैताला डायरी, पैताला यात्रा, मेरा समाचार, समाचार No comments
बागलुङ, १७ जेठ । पैताला कस्ता मानिसको पैताला हो ? जिल्लाको सुस्ताएको साहित्यिक माहोलका बिच आयोजना गरिएको लेखक पाठक संवाद कार्यक्रममा लेखक गनेस पौडेललाई पाठकले यस्तो प्रश्न गरे पछि उनले तन्त्र, मन्त्र र यन्त्र सहितको सत्यको कथा सुनाए । र भने, यो पैताला तिनीहरुको हो, जसले सत्यको खोजी गरिरहेका छन् । उनले थपे, यो उपन्यास मार्फत मेरो उद्धेश्य प्रश्नहरु सोध्नु हो, उत्तर दिनु होइन । लेखक पौडेलले आफ्नो उपन्यासमा कुमार नगरकोटीको प्रभाव भेटिएको भन्ने आरोपमा पनि गूरुप्रसाद मैनालीदेखी शुरु भएको आख्यान लेखन परम्पराको फेहरिस्त सुनाएर आफु फरक मिथकका साथ प्रस्तुत भएको दाबी गरे ।
बुक हिल प्रकाशनले नयाँ बिश्व अनलाइनको संयोजनमा बागलुङमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा लेखक पौडेल सँगै उपस्थित भएका चर्चित लेखक कुमार नगरकोटीले पैताला उपन्यास मुलुककै पहिलो तान्त्रिक उपन्यास भएको बताए । यो देश कथै कथाको देश हो, जता गए पनि कथा देखिन्छ, नगरकोटीले भने, पैताला उपन्यास भित्र पनि अरु १०, १२ उपन्यासको आभा भेट्न सकिन्छ । लेखक पौडेलको जस्तो किताव नेपाली साहित्यमा आवश्यक छ, उनले थपे, लेखकले पुस्तक मात्र दिएका छैनन्, तपाई हामी लेखक पाठकलाई पनि चूनौति दिएका छन् । मैले लेख्नुपर्ने उपन्यास यिनले कसरी लेखे ?
कार्यक्रममा बुक हिलका भुपेन्द्र खड्काले छोटो समयमै पैताला उपन्यासको देशव्यापी रुपमा माग भएको बताए । लेखक पाठक बिचको संवाद कार्यक्रमकै अवसरमा १ सय भन्दा बढी पुस्तक बिक्री भएको स्थानीय आयोजक संस्था नयाँ बिश्व अनलाइनका सम्पादक मुकेशचन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिए ।